Kaowao Burmese Version ကောင်းဝါ သတင်း
အင်္ဂလိပ် | မွန် | ထိုင်း | ဗွီဒီယို "Working together for change and lasting peace"
ကျနော်တို့အကြောင်း | ဆက်သွယ်ရန် Home သတင်း ဆောင်းပါး ကြေညာချက်
Downlad Firefox For Android ဖြင့်သာ ဖတ်ရှုရန် အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်သည်။
Print မွန်အမျိုးသားတို့၏ နောက်ခံသမိုင်း
“လူမျိုးဆိုသည်မှာ ရာဇဝင်အရ ပေါ်ပေါက်ဖြစ်လာပြီး တည်တံ့သောစကား၊ စာပေ၊ နယ်မြေ၊ စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေနှင့် ဦးညွတ်စွာ ရှိသောလူစုလူဝေးကို ခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် မွန်သည် ( Race tribe ) စသော အဆင့်တူများပူးပေါင်းထားခြင်းမဟုတ်ဘဲလူမျိုးတစ်မျိုး၏ဂုဏ်အင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံသောလူမျိုးဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ Untitled Document
မွန်သမိုင်း မွန်အမျိုးသားတို့၏နောက်ခံသမိုင်း အခန်း(၈) မွန်အမျိုးသားတို့၏နောက်ခံသမိုင်း အခန်း(၇) မွန်အမျိုးသားတို့၏နောက်ခံသမိုင်း အခန်း(၆) မွန်အမျိုးသားတို့၏နောက်ခံသမိုင်း အခန်း(၅) မွန်အမျိုးသားတို့၏နောက်ခံသမိုင်း အခန်း(၄) မွန်အမျိုးသားတို့၏နောက်ခံသမိုင်း အခန်း(၃) မွန်အမျိုးသားတို့၏နောက်ခံသမိုင်း အခန်း(၂) မွန်အမျိုးသားတို့၏နောက်ခံသမိုင်း အခန်း(၁)
မတ် - ဧပြီ -
မတ် - သြဂုတ်
ဇန္နဝါရီ - မေ-----------
ဇွန် - ဒီဇင်ဘာ
Top | Go Back Home
မူပိုင် © 2004 -
Kaowao Newsgroup. All Rights Reserved. Views